RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay Wolverhampton ka reebtay kooxda Liverpool FA Cup – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay Wolverhampton ka reebtay kooxda Liverpool FA Cup
(Liverpool) 28 Jan 2017 – Kooxda kubadda cagta Wolverhampton ayaa guul 2-1 kaga gaartay Liverpool garoonkeeda Anfield, iyadoo Reds laga cirib tiray tartanka FA Cup, waxaana Wolverhampton ay sidaasi ku gaartay wareegga 5-aad ee FA Cup.
Labo gool oo kooxda Wolverhampton ay u kala dhaliyeen Richard Stearman iyo Andreas Weimann ayaa lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta iyadoo Reds lagu hoggaaminayey 2-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta kooxda Liverpool ayaa hal gool iska soo guday waxaana 86’daqiiqo u dhaliyey Divock Origi, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-1 lagu dardaray Liverpool oo gurigeeda joogta.
>- Waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay kooxaha Liverpool iyo Wolves ku kulmaan FA Cup, tan iyo markii ay isku wajaheen wareegii afaraad ee tartankan xilli ciyaareedkii 1951/52.
>- Liverpool ayaa saddex guuldarro oo is xiga garoonkeeda kula kulantay tartammada oo dhan markii ugu horreysay tan iyo bishii October tan iyo sanadkii 2012.
>- Saddexdii guuldarro ee ugu dambeysay oo Liverpool ka soo gaaray FA Cup-ka iyadoo ku ciyaaraysa garoonkeeda Anfield ayaa dhammaandood kaga yimid kooxaha ka ciyaara heerka labaad.. (Barnsley 2008, Reading 2010 iyo Wolves 2017).
>- Jurgen Klopp ayaa la dhibtoonaya saddex guuldarro oo xiriir ah oo ku so gaartay garoonka kooxda uu hoggaamiyo, isagoo tababare ah markiisii ugu horreysay tan iyo bishii April sanadkii 2007, markaasoo uu tababare u ahaa Mainz.
>- Kooxda Wolves ayaa gaartay wareegga shanaad ee FA Cup markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2008.
>- – Andreas Weimann ayaa dhaliyey saddex gool afartiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ku ciyaaray garoonka Anfield.. (2 waxa uu ku dhaliyey Anfield isagoo ka tirsan Aston Villa iyo hal mar isagoo ka tirsan Wolves).
>- Kulankan waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee lagu kala nasto iyadoo 2-0 lagu hoggaaminayo qeybta hore kooxda Liverpool oo gurigeeda Anfield ku ciyaaraysa markii ugu horreysay tan iyo 14-ka bishii April 2016, markaasoo ay kulan ka tirsan Europa League ay Dortmund ku marisay.
>- Helder Costa ayaa ku lug yeeshay 10 gool 11-kiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu kooxdiisa Wolves u ciyaaray tartammada oo dhan.
>- Richard Stearman ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyay tartan waliba tan iyo bishii bishii April sanadkii 2014-kii, waana muddo haatan laga joogo 1013 maalmood, markaasoo goolkiisii ugu dambeeyey uu ka dhaliyey kulan ay wada dheeleen Wolves iyo Leyton Orient.
>- Divock Origi ayaa gacan ka geystay 8 gool 12-kiisii ciyaarood ee ugu dambeeyey oo uu dheelay kulamada koobabka gudaha dalka Ingiriiska laga dhigo.
>- Paul Lambert marnaba guuldarro kuma soo gaarin tartan rasmi ah garoonka kooxda Liverpool ee Anfield, isagoo tababare ah, shan jeer oo uu booqday, waxa uu guul ku soo gaaray 3 kulan, halka 2 kulan oo kale uu barbaro ku soo galay.
TOOS u daawo: Chelsea vs Brentford - LIVE (Shaxda sugan)
TOOS u daawo: Burkina Faso vs Tunisia - LIVE (Shaxda sugan)